Gadzira rako rako remagetsi iro raunogona kuvhura musuwo wegaraji nekuda kweminwe yako | Mahara emahara
Tiri panguva iyo zvinoita sekunge chinhu chakachengeteka kana chinokurumidza kwazvo kushandisa zvigunwe zvako, semuenzaniso, kuvhura nharembozha yako uye kana kuenda kubasa, mune izvi zvese zvese zvinopinda kuburikidza nekuchengetedzeka kunodiwa kana kumisikidzwa kuita chimwe chirongwa.
Kure neizvi, chokwadi ndechekuti, seprojekti umo kudzidza kuti mhando iyi yedhijitari inoshanda sei inogona kupfuura kunakidza, nekuda kweizvi nhasi ndoda kukutsanangurira maitiro ekukwirisa kiyo yemagetsi yemusuwo wako wegaraji unogona kuvhurwa uchishandisa chigunwe chako.
1 Gadzira yako wega yemagetsi kukiya kune yako garaji musuo nhanho nhanho iwe yaunogona kuvhura neyako chigunwe
2 Matanho anodikanwa kuti uvake yako wega yeminwe kuverenga iyo yekuvhura musuo wegaraji
2.1 Nhanho 1: Wiring uye Soldering iyo Yese Sisitimu
2.2 Nhanho 2: Kukodha uye kumhanyisa pane vanodzora
2.3 Nhanho 3: Isu tinounganidza chirongwa chose
2.4 Nhanho 4. Uchishandisa iyo system
Gadzira yako wega yemagetsi kukiya kune yako garaji musuo nhanho nhanho iwe yaunogona kuvhura neyako chigunwe
Kuenda mune zvakadzama zvishoma, ndikuudze iwe kuti kune ino chirongwa isu tiri kuzoshandisa a zvigunwe zvigunwe senge SparkFun GT-511C1R. Sezvazvinowanzoitika murudzi urwu rwevarairidzi, zvinofanirwa kutorwa mupfungwa kuti zvinyowani izvi zvese zvigadzirwa zvinogadzirwa zvakafanana saka hazvidi kuti zvive chaizvo izvi modhi.
Kana ukashinga kuita chirongwa ichi asi uine mimwe misiyano, senge iyo chigunwe chigunwe scanner chakashandiswa chakasiyana neicho chiri mudzidziso kana kuti musuwo wegaraji rinongoshandisa mamwe masisitimu, chimwe chinhu chichaitika padhuze nemukana uzere, aiwa unofanira sei kutya, iwe unogona kutevera iyo dzidziso asi kwete sezvazviri kubvira uchafanirwa kugadzirisa zvimwe zvese muwaya uye mukodhi yacho pachayo kuti zvienderane neyakaomarara.
Matanho anodikanwa kuti uvake yako wega yeminwe kuverenga iyo yekuvhura musuo wegaraji
Nhanho 1: Wiring uye Soldering iyo Yese Sisitimu
Kugona kuvhura musuwo wegaraji nekuda kweminwe yechigunwe chako, iwe unozoda maviri akasiyana zvikamu. Kune rimwe divi, isu tinoda gadzira yedu yega control panel, iyo yatinozoisa kunze kwemusha wedu. Mukati mepaneru yekudzora ndipo patichava nekuisa iyo minwe scanner, diki ruzivo ruzivo uye mamwe mabhatani ekuwedzera.
Chechipiri tichada gadza bhokisi rechipiri mukati megaraji chairo. Izvi zvichave zviri mukutarisa kwekutarisa kuti chigunwe chemunwe chakapinda mune yekutonga panotambirwa kana kwete nehurongwa uye, mune chiitiko chekururamisa kwakaringana, ramba uchigadzira chiratidzo chinozikanwa nemota iyo ichavhura musuwo wegaraji redu.
Kuita izvi isu tichada ATMega328p microcontroller iyo ichave iri pamusoro pekupa hupenyu kune iyo control panel iyo yatinoisa kunze kwemba yedu pachedu, yepaneru remukati isu ticha bheja pane ATTiny. Iwo mabhodhi maviri anozotaurirana neumwe neumwe kuburikidza neye serial kubatana. Kuti tiwedzere kuchengetedzeka kwesisitimu yese, isu tichaisa inotepfenyura kuitira kuti iyo ATTiny kadhi ivhare kubatana, kuitira kuti kana chakakoromora chikatangisa chekunze control panel, havagone kuvhura musuwo wegaraji nekuyambuka tambo dzinoverengeka.
Kana chirongwa ichi chikatendisa iwe uye uchifarira kuita chirongwa ichi, urwu ndirwo runyorwa rwezvinhu zvauchazoda:
JST chinongedzo cheGT-511C1R chigunwe chigunwe
Voltage gadziriro MCP1700-3V3
10 uF capacitor (zvikamu zviviri)
10 kOhm resistor (3 zvikamu)
100 ohm resistor (zvikamu zvitatu)
Pushbutton (zvikamu zvitatu)
28 uye 8 pini IC zvinongedzo, zvinobatsira kuchengetedza ma microcontroller kana uchinamira uye zviri nyore kwazvo kuronga
Zviteshi zvekubatanidza tambo dzepaneru tambo kune yemukati bhokisi isina kuita simbi
Bhokisi risingapinde mvura yekunze
AC kune DC inoshandura, semuenzanisojaja yefoni inogona kushandiswa
Panguva ino inguva yekubatanidza zvese Hardware pane zvakanyorwa. Iyo pfungwa, sezvauri kufungidzira zvechokwadi, inopfuura tevera dhayagiramu iri pamusoro pemitsara iyi, imwe chete maunogona kuona kurongeka kweese ari maviri mapaneru ekudzora uye yemukati module. Chimwe chidimbu chezano randinogona kukupa ndechekupa tambo dzeese ari maviri shanduri yazvino neLCD hurefu hwakati kuitira kuti ugone kuzvisungirira nekuzvigadzirisa panzvimbo chaiyo yaunogadzira mukati mekunze kwemvura bhokisi.
Kana panguva ino tikatarisa kwekanguva kodhi iyo ichagadziriswa nemutongi, iwe uchaona kuti mabhatani akabatana nemapini 12, 13 ne14, anozadzisa mashandiro e 'arriba','OK'uye'pasi'zvichiteerana. Izvi zvinoreva kuti inogona kunge iri zano rakanaka kuzviisa nenzira iyi kuitira kuti urambe uine pfungwa dzinoenderana zvakanyanya nebasa ravo.
Kupa yazvino kuhurongwa hwese hwatichashandisa, sezvakataurwa runyorwa rwezvinhu zvinodiwa, nharembozha ine chero chinobatanidza microUSB. Pfungwa yekushandisa iyi mhando yejaja inonyanya kupindura kune iyo yakachipa kwazvo uye pamusoro pezvose zviri nyore kuwana.. Imwe pfungwa yakasiyana ndeyekugona kupa masimba vatongi kuburikidza nekushandisa mabhatiri, kunyangwe panguva ino zvingave zvakanaka kushandisa chinoshandura chazvino shanduko kutungamira izvozvi sezvo iyo yeminwe inonzwa inowanzoshandisa yakawanda yazvino uye, ichipa iyo yese system nemabhatiri aunofanirwa kushandura iwo mazuva ese.
Nhanho 2: Kukodha uye kumhanyisa pane vanodzora
Panguva ino kunyanya kukuudza izvozvo zvese kodhi inofanirwa kuitwa neATMgaga 328p uye iyo ATTiny85 yakanyorwa uye kurongedzwa neArduino IDE. Mune ino chaiyo kesi isu tinofanirwa kuendesa iyo garagefinger.ino faira muATMega328p uye iyo diki_switch.ino faira muATTiny85. Kune rimwe divi, maNokiaLCD.cpp neNokiaLCD.h maraibhurari maibhurari maviri eiyo skrini yeLCD, aya akaunganidzwa kubva pamienzaniso yakatorwa kubva kuArduino saiti uye, kufanana nemaraibhurari ese, anofanirwa kuiswa mufolda 'makiraibhurari'yeArduino IDE yako kuti uzviwane. Iyi folda inowanzo kuwanikwa kubva pamudzi paunenge uine IDE yakaiswa, muWindiows inowanzo kuve "% HOMEPATH" \_ Zvinyorwa \_ Arduino \_ maraibhurari. Ini ndinokusiira mafaera ekurodha pasi pazasi pemitsara iyi:
Pamusoro peizvi iwe unenge uchidawo maraibhurari kuitira kuti chigunwe chigunwe scanner ishande. Panguva ino inofanirwa kutakurwa mupfungwa kuti zvinosuruvarisa Iwo maraibhurari akabatanidzwa neiyo SparkFun saiti haishande sezvo akagadzirirwa iyo GT-511C3 modhi, inodhura zvakanyanya, uye kwete yeshanduro yatiri kushandisa, pamwe chimwe chinhu chakanyanya kunetsa kuwana asi chakachipa kwazvo. Iwo maraibhurari anoshanda eGT-511C1R anogona kuwanikwa pa github.
Kana mushure mekurodha pasi mafaera ese uye nekutarisa kodhi yaunoda ipa chengetedzo huru kune ino sisitimu Ndinokukurudzira, semuenzaniso, kutsvaga nekutsiva zviitiko zvese a 'secretstring'ne password yako pachako. Imwezve inonakidza ruzivo iyo inogona kubatsira kuita kuti yako system ive yakachengeteka iri kushandura iyo buf inoshanduka mune diki_switch.ino faira kuitira kuti ihwo hwakaenzana hwakaenzana ne password yaunoda kushandisa.
Variable overrydeCode, Inotsanangurwa mufaira regaraji.ino, ine 8-bit inomiririra iyo kumusoro / pasi bhatani kudzvanya kuteedzana iyo inogona kushandiswa kuvhura musuwo wegaraji uye kurodha mafingerprints matsva kuhurongwa pasina kushandisa chigunwe chinozivikanwa. Izvi zvinobatsira kwenguva yekutanga chishandiso chinoshandiswa sezvo iyo scanner ndangariro ichave isina chinhu. Zvingave zvinonakidza kushandura iyi yekutanga kukosha.
Nhanho 3: Isu tinounganidza chirongwa chose
Kana tangoedza chirongwa chose, inguva yegungano rekupedzisira. Kune izvi isu tinofanirwa kukwira iro rese control panel mukati medu isina mvura bhokisi. Sezvauri kuona mumifananidzo, kuitira kuti pasave neanokwanisa kuwana mutongi, pamusoro pebhokisi risingapindi mvura, bhokisi reacrylic rave richishandiswa patinoisa chete skrini yeLCD nemabhatani ekupinda, iyo yese sisitimu ichave yakaiswa mukati meiyi bhokisi.
Iri bhokisi rinofanira kuiswa kunze kwemba yako uye rakabatana zvakananga nebhokisi kwatinoisa iyo ATTiny. Panguva ino, kukuyeuchidza iwe kuti muATTiny iwe unofanirwa kubatanidza tambo kuti utaure masaini kumota iyo inovhura musuwo wegaraji. Muchiitiko changu zvaive nyore kwandiri sezvo mukati megaraji chaimo ndaive nebhatani rekusundira pamadziro raiita basa rimwe chete iri.
Nhanho 4. Uchishandisa iyo system
Kana tangove nehurongwa hwese hwakaiswa, isu tinongofanirwa kudzvanya chero matatu mabhatani kuti ese ari maviri LCD skrini uye chigunwe chigunwe scanner ivheneke. Panguva ino, chishandiso chinomirira kusvikira waisa munwe pane scanner. Kana munwe wawakaisa pa scanner ukazivikanwa, musuwo unovhurika uye menyu inoratidzwa pachiratidziro kuvhura / kuvhara musuwo zvakare, wedzera / bvisa zvigunwe, shandura kupenya kwechidzitiro ... Chigadzirwa chinodzima anenge masekondi masere mushure mekubaya kiyi yekupedzisira. Kuti uchinje nguva yenguva yekumirira, unofanirwa kugadzirisa basa racho kumiriraButton mune iyo garagefinger.ino faira.
Sezvatakataura mundima dzapfuura, iwe unogona kushandisa yakanyanyisa kuteedzana uchishandisa kumusoro / pasi macores anoteverwa na 'OKkuwana mukana kune ino sisitimu. Izvi zvinobatsira kekutanga nguva yaunoshandisa chishandiso sezvo, panguva ino, iyo scanner haizove neminwe yeminwe mundangariro yayo. Iyo yekutanga kuteedzana inopihwa ne8-bit mabhinari anomiririra iyo nhamba iyo inochengetwa musiyano kudarikaCode mune iyo garagefinger.ino faira apo '1' inomiririrwa ne 'kumusoro' bhatani uye '0' inomiririrwa ne 'pasi' bhatani..
Imwe poindi yekuchengeta mundangariro ndeyekuti, kana iwe ukachinja iwo akateedzana uye wozoikanganwa pasina kuwedzera mafinger prints kuchigadzirwa, ichave yakanyatsovharwa uye uchafanirwa kurongedza iyo ATMega328p uye kumanikidza iyo EEPROM kudzima kudzima iyo mudziyo. kodhi.
Mamwe Mashoko: zvinodzidziswa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Gadzira rako rako rekodhi remagetsi raunogona kuvhura musuwo wegaraji nekuda kweminwe yako
Maitiro ekugadzira robhoti: 3 dzakasiyana sarudzo